TPEC oo Shahaadooyinka Aqoonsiga Guddoonsiisay Ururo aan Shuruudaha Buuxin [SAWIRRO] | SAHAN ONLINE
TPEC oo Shahaadooyinka Aqoonsiga Guddoonsiisay Ururo aan Shuruudaha Buuxin [SAWIRRO]
GAROOWE –Guddiga KMG ah ee doorashooyinka Puntland ee TPEC, ayaa maanta magaalada Garoowe ku qabtay shir lagu soo bandhigayay 5 urur siyaasadeed oo is-diiwaangaliyay kuwaasoo la guddoonsiiyay shahaadooyinka Aqoonsiga.
Shirkan ayaa lagu casuumay Wasiiro katirsan dowladda gaar ahaan Warfaafinta, Arrimaha Gudaha, Dastuurka, Guddoomiyaasha gobollada, ururrada is-diiwaangaliyay, dhalinyarada iyo qaybaha kala duwan ee bulshada rayidka ah.
Guddoomiyaha Guddiga doorashooyinka Puntland C/raxmaan Diiriye Samatar (Shuuqe) oo furitaankii kulanka ka hadlay, ayaa ku dhawaaqay magacyada ururada is-diwaangaliyay, wuxuuna uga mahadceliyay sida wanaagsan ee ay ugu dhiiradeen inay furtaan ururo.
“Hadaba, Guddigu isaga oo gudanaya waajibaadka iyo xilalka uu u idmanyahay, wuxuu maanta shirkan u qabtay in hay’adaha dowladda ee heer Xukuumad, Gobol, Degmo iyo qaybaha kala duwan ee Bulshada, usoo bandhigayaa shanta urur siyaasadeed oo kala ah; Umadda, Garsoor, Ubax, Himilo iyo Aaran ee sida KMG ah uga diiwaangashan xarunta dhexe ee guddiga doorashooyinka Puntland.”
Guddoomiyaha Guddiga Doorashada Puntland C/raxmaan Diiriye Samatar (Shuuqe) oo
Guddoomiyuhu wuxuu sharaxaad ka bixiyay waajibaadka iyo shaqada guddiga doorashooyinka ay u xilsaaran yihii, waxaana uu yiri “Anagu waxaan u idmanahay marka 1aad inaanu diiwaangalino ururrada siyaasadda, inaanu wacyigalin samayno sababtoo ah dadkaan waxay u baahanyihiin inay fahmaan howshan, waxaa dhacda in dadku na weydiiyaan waqtiga aan u furayno xisbiyo, bahashu halkaas ayay maraysaa.” ayuu yiri, wuxuuna sii raaciyay
“Annagu waqtigayagu wuxuu ku egyahay marka aan soo saarno sadex Xisbi siyaasadeed oo heer qaran ah oo ku soo baxaya doorashooyinka dowladaha hoose, islamarkaana diyaar u noqda inay u tartamaan doorashada guud ee Puntland, halkaas ayuu teermayagu jooga, waxaana cadaynaya xeerka guddiga doorashooyinka iyo Dastuurka Puntland .
Ururada la siiyay shahaadooyinka aqoonsiga ayaan weli buuxin qaar ka mid ah shuruudaha rasmiga ah ee laga doonayay oo kala ahaa in Urur kastaa magaalada madaxyada 6 gobol uu xafiisyo ka furto, 300 taageerayeel ahna urur walba laga diwaangaliyo, islamarkaana uu shirweyne uu ku qabsado caasimada Puntland, doortaana guddoomiyaha iyo ku-xigeenadiisa.